Kukho abantu abanokuhlala ngokuthula ngaphandle kokutya iswekile. Unokutshintsha iswekile ngobusi. Amantombazana alandela umzobo wawo, zama ukusela itiye ngaphandle kweshukela. Wonke umntu unokuzondla kuye. Inyaniso kukuba imfuneko yokutya into emnandi iya kuba khona. Ngoko ukuba ungadli ishukela, ungadla iesweets kunoko.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba, ngokomyinge, umntu angadla i-20puni yeeshukela ngosuku. Kuninzi! Ngaba yinyani ukuba ushukela unobungozi kwaye akufanelekanga ukuyisebenzisa? Mhlawumbi ndifanele ndiyiqonde? Emva koko, zininzi iinkolelo, ngenxa yokuba asiyisebenzisi.
Kancinci malunga noshukela
I-Sugar ikwixesha elithandwa kakhulu ngumkhiqizo. Ukongeza kwongezwa kwikhofi kunye neyeyi, isetyenziswe ekuphekeni. Sithanda ukuyongeza kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya, i-borsch, i-sauces, izinto ezibhaka, njl. Indoda idla phantse iswekile ngokutya.
Ngaphambili, iswekile yanyuswa kuphela kwi-sugar cane. Kodwa ngoku akakhululekile kwi-beet ishukela. Phantse ama-60% kuwo wonke ushukela kwihlabathi avelise umhonkco, kunye ne-40% ye-beet. Iswekile iqulethe sucrose. Ingena emininzi emininzi emzimbeni, kuba iphosa ngokukhawuleza ibe yi-fructose ye-iglukose. Umthombo omhle wamandla kumntu. Phantse i-100 amagremu eswekile -410 khalori. I-Sugar i-carbohydrate ehlanjululwa kalula.
Umntu malunga neveki udla 1 kg ishukela. Sidlula umgangatho wokusetyenziswa kwayo phantse kathathu. Ukutya kwansuku zonke akufanele kudlule i-50 g. Kodwa nangona ungasiphuzi itiye okanye ikhofi kunye noshukela, kwakhona iqulethe nezinye ukutya onokuzisebenzisa.
I-Sugar yinto yam ye-heroin
Sisebenzise ukuba iswekile ingumgubo omhlophe nje. Okokuthi, asifuni ukutshintsha. Siyasetyenziswa kumnandi wethu kwaye asiyikuyichitha. Kuxhomekeka. Enyanisweni, uphando lubonisile ukuba le mveliso ibangela ukutshabalala kubantu. Xa umntu esidla i-isahar, utshintsho luvela kwingqondo efana nemiphumo ye-cocaine, i-nicotine kunye ne-morphine.
Ngoko ungatsho ngokukhuselekileyo ukuba iswekile yilezi ziyobisi. Kufuneka uvume ukuba kunzima ukulukhawula ukuba usebenzise ixesha elide. Okanye kungenakwenzeka. I-Tea ibonakala iyisiqhwaba ngaphandle kwesosaji. Ukusuka kuyo ukuphuma kuqala kwaye usongeza i-vchay ifana.
I-Sugar ayikho nje ipowder emhlophe, i-brown, palm and sugar cane, kunye ne-fructose, isiraphu yengqolowa, ubusi, i-lactose, ishukela eluhlaza, i-dextrose, njl njl.
Enye yezona zinto zikhethwa kakhulu "ushukela" ziyiyo yokuba isifo sikashukela sinokubangelwa ngenxa yokusetyenziswa kweswekile. Umzekelo, isifo sikashukela esineminyaka emi-2 - esona siqhelekileyo. Kubangelwa kukutya ngokutya. Kwaye asithethi nje iishukela, kodwa zincinci nje, ukutya okuthosiweyo, njl.
Ngenxa yokutya ukutya okuninzi, umzimba kufuneka uvelise i-glucose. Kwaye oku kubangele imiphumo emibi. Wena umzimba kufuneka ukwandise imveliso ye-insulin. Ngokuhamba kwexesha, inani eligqithiseleyo le-insulin lichaphazela ukusebenza kwenkqubo ngokupheleleyo. Zenzeka emzimbeni, kwaye oku kukhokelela ekubeni i-pancreas ayikwazi ukuvelisa inani elifanelekileyo le-insulin.
Uninzi lweswekile-amaninzi amanqatha!
Iswekile ayinayo i-fiber, iivithamini okanye nayiphina i-microelements, i-carbohydrate engenanto. Kodwa ukususela kwinqanaba elincinci leeshukela ngosuku awuyi kutyumba. Abasetyhini abaninzi bakholelwa ukuba xa beshiya iswekile ngokupheleleyo, banako ukulahlekelwa isisindo. Akunjalo, bafazi abathandekayo.
Ukususela ekusebenziseni ushukela kwixabiso elilinganiselweyo alinakongezwa. Ushukela kumxholo wekhalori ufana neprotheni eqhelekileyo. Ukuba unqabile ukutya iswekile kwaye ungayizaliseli ngomnye umkhiqizo, ngoko umntu uya kuziva ukuphazamiseka, ukukhathala kunye nokulamba.
Iishukela zifakwe kwisibindi ngendlela ye-glycogen. Yaye xa i-reserve igqithisa iimeko eziqhelekileyo, iswekile ifakwe kwiifomthi ezinamafutha. Ngokuqhelekileyo ibonakala kwisisu nasemathangeni. Ngoko ke, sigqiba ekubeni kukho iswekile, kodwa kuya kuba kuhle nakhona.
Ushukela ukhokelela ekuguga
Ndifuna ukuthetha ukuba lo mveliso. Ndiyakhula njani kwishukela? Kodwa le nto inyaniso. Ukuba uyidla ixabiso elikhulu lalo mnandi, emva kokuba ixesha lakho, ama-wrinkles aya kubonakala ebusweni bakho.
I-Collagen isinceda isikhumba sethu sibonakale siselula, luyiprotheni yendalo. Yenza isikhumba sethu siphuze kwaye siphumelele. Kodwa xa idibanisa noshukela emzimbeni, ilahlekelwa iipropati zayo. Ngoko sinokucinga ukuba akuvelwanga. Ngenxa yoko, amanye amantombazana angama-20 sele ebonakala ngathi uneminyaka engama-28 ubudala.
Sincoma ukunciphisa ukusetyenziswa kweswekile kunye nokusetyenziswa kwemveliso yezityalo kunye ne-collagen. Baya kunceda ukubuyisela ulusu kwaye luwenze lubuhle kwaye luhle.
Ushukela kwiisyiphu kunye neziqhamo zihlukile
Umbhalo othakazelisayo. Kodwa enyanisweni, ukuba ngeeskese, iswekile iyafana kwimovodka. Kwaye ukuba kuchaneke ngakumbi, yi-fructose. Ngokusesikweni kwiziqhamo kukho ixabiso elikhulu lamavithamini, izinto ezilandelelana kunye noshukela oluncinane. Kodwa kwi-confectionery kukho phantse enye kunye ne-vitamin. Ngokukodwa ushukela unokutshiswa kwaye utshisa i-glucose egazini.
Ngoko ke ukuba ufuna ukutya okumnandi kwaye kumnandi, yidla isithelo esingcono kuneswidi. Yinandi kwaye iyanceda!
I-Sugar idibene nokuxhatshazwa kwabantwana
Ngaphambili, abaninzi abantwana bekholelwa ukuba isizathu sokunyanzeliswa kwabantwana kwakusisetyenziselwa ushukela ngokweqile. Kodwa uphando lwangoku luye lwabonisa ukuba oku kudukisa. Kuyinto yokukhululwa kwe-adrenaline eyabangela ukungaxhatshazi.
Ukuba oku kunokwenzeka, sincoma ukuba unciphise i-sugar to take in maximum. Awukwazi ukuyikhuphela ngokupheleleyo. Ngenxa yokuba kuncinci, kulungile kumzimba. Ungadli i-candy, ubisi olunomsoco, umjelo, njl. Ukuba akunakwenzeka ukuba uphile ngaphandle kweshukela, ngezinye izihlandlo unako ukuziqhayisa nge-chocolate.
Imbewu ye-sunflower, iinzuzo kunye nenzakalo
Imveliso efunekayo kunyango lomhlaza
Iiprijiji ezinjalo ezincedo
Yintoni ebalulekileyo ukwazi malunga nokulungiswa kombono we-laser
Indlela yokuvuma uthando kumfana ngoFebruwari 14: ukuvuma okulungileyo kunye nokuthintela
Iidlephelo zenkosikazi ezikhutheleyo: silungiselela iintlanzi ebusika
Amathambo kunye nesigcina
Ukudandatheka kunye neurosa kubantwana nakwishumi elivisayo
Indlela yokujongana nokuvuvukala ngexesha lokukhulelwa?
I-Salmon kwi-honey and coriander sauce
Turkish pilav evela eBulgur